Uhuru oo hogaamiyayaasha Soomaalida Kenya 14 maalmood u qabtay | Xaysimo
Home War Uhuru oo hogaamiyayaasha Soomaalida Kenya 14 maalmood u qabtay
Uhuru oo hogaamiyayaasha Soomaalida Kenya 14 maalmood u qabtay
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyayaasha Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalida ah u qabtay 14 maalmood, si ay ula yimaadaan xal wax looga qabanayo dhibaatooyinka amni-darro iyo falalka argagixiso ee ka jira gobolka.
Uhuru ayaa dalabkan hor-dhigay barasaabyada kala ah Cali Roba (Mandhera), Maxamed Cabdi Maxamud (Wajir), iyo Cali Korane (Gaarisa), oo ay wehliyaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamanka Kenya Aadan Barre Ducaale, iyo xildhibaano uu ka mid yahay Adan Kenynan.
Sida uu weriyey wareyska The Standard, madaxweynaha ayaa xubnahan u sheegay in falalka argagixiso ee gobolka ka socda ay gaysanayaan dad gobolka kasoo jeeda, ayna qasab tahay inay wax ka qabtaan dadka gobolka.
Sida ay sheegeen dad goobjoog u ahaa kulanka, Uhuru ayaa u sheegay mas’uuliyiinta Soomaalida ina hay’adaha amniga Kenya ay xireen xuduudda Soomaaliya, islamarkaana aysan jirin xubno Shabaab ah oo usoo gudbaya Kenya.
Uhuru ayaa sheegay in xalka wax looga qabanayo saameynta ay weerarada ku yeesheen gobolka uu u yaallo hoggaanka gobolka.
Barasaab Cali Korane ayaa kulanka ku sheegay mid miro-dhal ahaa, islamarkaana ay madaxweynaha hordhigeen arrimaha gobolka ka taagan sida amniga iyo waxbarashada.
“Waxa uu ballan-qaaday inuu xallin doono, hase yeeshee waxa uu dalbaday inaan annaga ka cayaarno kaalin fir-fircoon,” ayuu yiri Korane.
Hogaamiyayaasha ayaa soo bandhigay dhibaatada ka dhalatay macallimintii aan Soomaalida ahayn ee gobolka isaga baxay kadib markii ay kordheen weerarada, hase yeeshee Uhuru ayaa dalbaday in marka hore xaalaadaha qaar wax laga qabto si macallimiinta dib loogu soo celiyo.
Macallimiinta aan Soomaalida ahayn ama kasoo jeedin deegaanka ayaa laga saaray gobolka markii weeraro badan si toos ah loola beegsaday.
Dowladda Kenya ayaa ciidamo dheeri ah gaysay gobolka, hase yeeshee ma muuqato in taas ay yareysay weeraradii Al-Shabaab ay ka gaysaneysay gobolka.
Ma cadda sida hogaamiyayaasha Soomaalida ay hadda xal ula iman karaan muddo laba toddobaad gudahood ah.